रेबिज लागे मृत्यु पक्का - Naya Patrika
रेबिज लागे मृत्यु पक्का
डा. राकेशकुमार यादव
रेबिज एक प्राणघातक रोग हो । रेबिज लागेपछि छोटो समयमै मानिसको मृत्यु हुन्छ । त्यसैले रेबिजको लक्षण देखिनासाथ यसको उपचार गर्नुपर्दछ । रेबिजका ९५ प्रतिशत रोगी कुकुरको टोकाइबाट हुन्छन् । विश्वमा हरेक वर्ष रेबिज रोगबाट करिब ५० हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । रेबिजबाट बच्न यस्ता सतर्कता अपनाउन सकिन्छ :
रेबिज कसरी सर्छ ?
रेबिज एक किसिमको भाइरसले लाग्ने रोग हो । रेबिज लागेको कुकुर, स्याल वा अन्य जनावरमा रेबिज भाइरस हुन्छ । कुकुर, स्याल, चमेरो, बिरालोलगायत तातो रगत हुने र स्तनधारी जनावरबाट रेबिज भाइरस सर्ने गर्छ । त्यस्ता जनावरले टोकेपछि घाउका माध्यमबाट रेबिज भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्छ । जसले गर्दा मानिसमा रेबिज रोग लाग्छ ।
-रेबिज लागेमा ज्वरो आउने, झमझमाउने, टोकेको ठाउँमा अत्यधिक दुख्ने हुन्छ । त्यस्तै पानी, हावादेखि डराउने, चिडचिडाहट हुने, रिसाउनेजस्ता समस्या पनि देखिन्छन् ।
-रेबिजका कारण आँखा, नाक, मुख र शरीरमा घाउ हुने गर्दछ । यसबाट अरू मानिसमा पनि सर्न सक्छ ।
-रेबिजका बिरामीले पानी पिउँदा घाँटीमा दुख्ने गर्छ । रेबिजले स्नायु प्रणालीसँगै श्वासप्रश्वासमा पनि बाधा उत्पन्न गर्न थाल्छ ।
-रेबिजका कारण हृदयाघात र मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
-घरपालुवा कुकुरलाई नियमित रूपमा खोप लगाउने ।
-भुस्याहा कुकुरबाट बच्ने र सम्भव भए व्यवस्थापन गर्ने ।
-स्याल, चमेरो, बिरालोको टोकाइपछि रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने ।
-रेबिज रोग लागिसकेपछि ज्यान बचाउन गाह्रो पर्छ । रेबिजपछि बिरामीको दुखाइ व्यवस्थापन र बाँचुन्जेल सजिलो बनाउने मात्र हो । त्यसैले यसको लक्षण देखिएलगत्तै उपचारमा लागिहाल्नुपर्दछ।
-रेबिजको भाइरस हुने सम्भावित जनावरले टोकेपछि तत्काल साबुनपानीले घाउ सफा गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् जति सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याई रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्दछ ।
रेबिजका बिरामी अस्पताल आउँदा झमझमाउने सास फेर्न गाह्रो हुने पानी र हावादेखि डराउने आत्तिने समस्या लिएर आउने गर्दछन् । यसको कारण भने कुकुरले टोकेको एक–दुई महिनापछि मात्र बिरामी अस्पताल पुग्ने गर्दछन् । त्यसअघि उनीहरूले टिटानसको खोप मात्र लगाएका हुन्छन् । टिटानसको खोपले मात्र रेबिजबाट जोगाउँदैन । कतिपयले त्यही खोप पनि लगाएका हुँदैनन् । नेपाल सरकारले रेबिजविरुद्धको खोप निःशुल्क गरेको छ । तर पनि धेरैलाई यसबारेसमेत जानकारी छैन । रेबिजजस्तो खतरनाक रोगलाई बेवास्ता गर्दा धेरैको ज्यान गएको छ ।